I-China Z-LION ingxenye ye-rhombus ephindwe kabili ye-trapezoid amathuluzi okugaya ukhonkolo abakhiqizi nabaphakeli |Idayimane ye-ZL
Igrit etholakalayo::6#,16#,30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#
Lokhuithuluzi lokugaya ukhonkoloisesimweni esijwayelekile se-trapezoid.Ingafakwa ezinhlobonhlobo zemishini yokugaya yaphansi ngezimbobo ezi-3 epuleti le-trapezoid.Izimbobo ezi-3 zingacutshungulwa i-M6 ukuze zilingane nezigayi zaphansi ezifana ne-SASE, STI, njll. noma imigodi engenalutho engu-D9mm ukuze ilingane nezigayi zaphansi zase-China ezifana ne-Xingyi, ASL, njll.
Leli thuluzi lokugaya ukhonkolo we-trapezoid linezingxenye ezi-2 ngesimo se-rhombus.Amasegimenti e-rhombus anemiphetho ebukhali avula ukhonkolo ngokushesha futhi anikeze izinga lokususwa kwesitoko esisheshayo kuyilapho usayizi wesegimenti omkhulu uhlinzeka ngezinga lokuguga elimangalisayo.
Leli thuluzi lokugaya ukhonkolo we-trapezoid lisetshenziswa kakhulu ukulinganisa izindawo ezingalingani noma amalunga ephansi likakhonkolo.Iphinde isebenze ngokuphumelelayo ekususeni ukunamathela futhi ngeke ishiye imihuzuko ejulile njenge-PCD eyenza.
Leli thuluzi lokugaya ukhonkolo we-trapezoid litholakala ku-super soft, soft extra, soft, medium, hard, extra hard, super hard bond.Igrits etholakalayo 6#, 16#, 30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#.
I-Z-LION ingxenye ye-rhombus ephindwe kabiliamathuluzi okugaya idayimane e-trapezoidzisetshenziselwa kakhulu ukulinganisa nokugaya ukhonkolo.Izici ezikhethekile zaleli thuluzi lokugaya i-trapezoid zimi kanje:
Izingxenye zomumo we-rhombic zenza ithuluzi libe bukhali kakhulu kunomumo ojwayelekile.
Inhlanganisela yamadayimane ebanga lemboni kanye ne-matrix ehlala isikhathi eside futhi eyingqayizivele.
Ukugxiliswa kwedayimane okunengqondo nokushisela okuphrofeshinali ukuze kunwetshwe isikhathi eside sethuluzi.
Isusa isitoko ngokushesha nangempumelelo ukuze kwehliswe kakhulu izindleko zamathuluzi nezabasebenzi.
Umumo wamasegimenti ungashintshwa ube unxande, oyindilinga, ibhokisi lomngcwabo, umcibisholo njll.
Okwedlule: I-Z-LION izingxenye ezimbili zebhokisi lamapuleti okugaya ukhonkolo we-trapezoid
Olandelayo: I-Z-LION imicibisholo ephindwe kabili ye-trapezoid izicathulo zokugaya ukhonkolo